မြန်မာ့ နည်း မြန်မာ့ဟန်နှ င့် အိမ်ထောင်သည် အ အိုတွေ အပျိုလေးတွေ လို ပြန်ဖြစ်လာစေဖို့ နည်းလ မ်းကောင်း – Zartiman
မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နှင့် အိမ်ထောင်သည် အအိုတွေ အပျိုလေးတွေလို ပြန်ဖြစ်ဖို့နည်းလမ်းကောင်းကို သိပြီးကြပြီလား? အိမ်ထောင် သည် မိန်းမတွေဟာ မိန်းမကိုယ် ပြန်လည်ကျဉ်းစေဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ မသုံးချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေ ရှိပါတယ်။
ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ကြောက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဈေးကြီးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆေးတွေ မသုံဘူးဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်လို့ရပြီး စိတ် ချရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး ရှိပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ ကြွက်သားတွေ လျော့ရဲတာကို ပြန်လည် တင်းရင်စေပြီး ပြန်လည်ကျဉ်းစေနိုင်ပါတယ်။
ဆီးဖြူသီးကိုတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဆီးဖြူသီးဟာ မိန်းမကိုယ်အတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူ နည်းပါးမှာ ပါ။ဆီးဖြူသီး (၅ လုံးလောက်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပါ။ ပြီးရင် ဆူပွက်နေတဲ့ ရေနွေး (ရေချိုးရေခွက်) တစ်ခွက်စာထဲမှာ ဆီးဖြူသီး (၅) လုံး ကို ထည့်ပြုတ်ပါ။ ဆီးဖြူသီးလေးတွေ နူးပျော့လာပြီ အရောင်လေးပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ ရေနွေးအိုးမီးအပူပေးတာကို ရပ်လိုက်ပါ။
လုံးဝအေးစက်သွားအောင် အအေးခံလိုက်ပါ။ အေးသွားပြီဆိုရင်တော့ မိန်းမကိုယ်ကို ရေဆေးတဲ့အခါ ရေအစား ဆီးဖြူသီး ပြုတ်ရည် ကိုသာ အသုံးပြုပြီး ဆေးကြောပေးပါ။တစ်နေ့ကို (၃) ကြိမ်လောက် ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုပြီး တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင် သိသာတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိစေမှာပါ။
မွနျမာ့ နညျး မွနျမာ့ဟနျနှ ငျ့ အိမျထောငျသညျ အ အိုတှေ အပြိုလေးတှေ လို ပွနျဖွဈလာစဖေို့ နညျးလ မျးကောငျး
မွနျမာ့နညျး မွနျမာ့ဟနျနှငျ့ အိမျထောငျသညျ အအိုတှေ အပြိုလေးတှလေို ပွနျဖွဈဖို့နညျးလမျးကောငျးကို သိပွီးကွပွီလား? အိမျထောငျ သညျ မိနျးမတှဟော မိနျးမကိုယျ ပွနျလညျကဉျြးစဖေို့အတှကျ ဆေးဝါးတှေ မသုံးခငျြတဲ့ အိမျထောငျရှငျမမတှေ ရှိပါတယျ။
ဆေးရဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကို ကွောကျလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ဈေးကွီးလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ဆေးတှေ မသုံဘူးဆိုရငျ လှယျလှယျကူကူပွုလုပျလို့ရပွီး စိတျ ခရြတဲ့ နညျးလမျးကောငျးလေး ရှိပါတယျ။ဒီနညျးလမျးလေးဟာ မိနျးမကိုယျရဲ့ ကြုံ့နိုငျဆနျ့နိုငျတဲ့ ကွှကျသားတှေ လြော့ရဲတာကို ပွနျလညျ တငျးရငျစပွေီး ပွနျလညျကဉျြးစနေိုငျပါတယျ။
ဆီးဖွူသီးကိုတော့ အားလုံးရငျးနှီးပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ ဆီးဖွူသီးဟာ မိနျးမကိုယျအတှကျ ကောငျးတယျဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူ နညျးပါးမှာ ပါ။ဆီးဖွူသီး (၅ လုံးလောကျကို ရစေငျအောငျဆေးပါ။ ပွီးရငျ ဆူပှကျနတေဲ့ ရနှေေး (ရခြေိုးရခှေကျ) တဈခှကျစာထဲမှာ ဆီးဖွူသီး (၅) လုံး ကို ထညျ့ပွုတျပါ။ ဆီးဖွူသီးလေးတှေ နူးပြော့လာပွီ အရောငျလေးပွောငျးလာပွီဆိုရငျတော့ ရနှေေးအိုးမီးအပူပေးတာကို ရပျလိုကျပါ။
လုံးဝအေးစကျသှားအောငျ အအေးခံလိုကျပါ။ အေးသှားပွီဆိုရငျတော့ မိနျးမကိုယျကို ရဆေေးတဲ့အခါ ရအေစား ဆီးဖွူသီး ပွုတျရညျ ကိုသာ အသုံးပွုပွီး ဆေးကွောပေးပါ။တဈနကေို့ (၃) ကွိမျလောကျ ပွုလုပျပေးဖို့ လိုပွီး တဈပတျလောကျဆိုရငျ သိသာတဲ့ ရလဒျကို ရရှိစမှောပါ။
ကျောက်ကပ်နှင့် အူကျခြင်းတို့အတွက် မုန်လာဥဖြူ၏ အစွမ်း